भोलिको राशिफल हेर्नुहोस : मिति २०७८ साल जेठ १४ गते शुक्रबार तदनानुसार ईश्वी सन् २०२१ मे २८ तारिख – SUDUR MEDIA
भोलिको राशिफल हेर्नुहोस : मिति २०७८ साल जेठ १४ गते शुक्रबार तदनानुसार ईश्वी सन् २०२१ मे २८ तारिख
May 27, 2021 May 27, 2021 AdminLeaveaComment on भोलिको राशिफल हेर्नुहोस : मिति २०७८ साल जेठ १४ गते शुक्रबार तदनानुसार ईश्वी सन् २०२१ मे २८ तारिख
भोलि मिति २०७८ साल जेठ १४ गते शुक्रबार । ईश्वी सन् २०२१ मे २८ तारिख । नेपाल संवत् ११४१ । राक्षस संवत्सर । उत्तरायण । ग्रीष्म ऋतु । श्रीशाके १९४२ । जेठ कृष्णपक्ष । तिथि– द्वितीया,१८ घडी ४७ पला, दिउसो १२ बजेर ४२ मिनेट उप्रान्त तृतीया । नक्षत्र–मूल,४६ घडी २४ पला, बेलुकी ११ बजेर ४५ मिनेट उप्रान्त पूर्वाषाढा । योग–साध्य, ३३ घडी पला, बेलुकी ०६ बजेर ३३ मिनेट उप्रान्त शुभ । करण– गर, दिउसो १२ बजेर ४२ मिनेट उप्रान्त वणिज,बेलुकी ११ बजेर ३७ मिनेट उप्रान्त भद्रा । आनन्दादिमा–स्थिर योग । चन्द्रराशि–धनु । काठमाडौंमा सूर्योदय बिहान ०५ बजेर ११ मिनेट,सूर्यास्त बेलुकी ०६ बजेर ५१ मिनेट । दिनमान ३३ घडी १० पला । विश्व महिला स्वास्थ्य दिवस ।
मेष(चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ) औषधीजन्य तथा खाद्यान्नसँग सम्बन्धीत सामानको उत्पादन तथा व्यापार व्यावसाय फस्टाएर जानेछ भने अन्य क्षेत्रमा गरिएको लगानीमा मन्दि आउनेछ । बौद्धिक ब्यात्तित्व तथा बिशिष्ट ब्यात्तिहरु सँग भेटघाट हुनेछ भने नयाँ योजना बनाएर कार्यान्वयनको चरणमा लगि आम्दानिका स्रोतहरु बढाउँन सकिनेछ । कृषि तथा पशुपालन व्यावसायमा लगानी गरि राम्रै आम्दानी गर्न सकिनेछ ।
बृष(ई,ऊ,ए,ओ,वा,वी,वू,वे,वो) घर परिवार तथा बिशेष गरि दिदि बहिनी सँग मनमुटाब बढ्ने योग रहेकोछ । भौतिक तथा सवारि साधन प्रयोग गर्दा ख्याल गर्नुहोला अप्रिय घट्ना नघट्ला भन्न सकिन्न । खानपान तथा बाहिरी बाताबरणको ख्याल गर्नुहोला स्वास्थ्यमा समस्या आई काम गर्न असजिलो महशुष हुनेछ । माया प्रेममा सामान्य मनमुटाब हुँने तथा नचाहादा नचाहादै छुट्टिनु पर्ने बाध्यता आउँनेछ । पढाई लेखाईमा मन नजाने हुँनाले नतिजा अरुकै पोल्टोमा पर्नेछ ।
मिथुन (का,की,कू,घ,ङ,छ,के,को,हा) माया प्रेममा रमाउँन चाहनेहरुका लागि समयले साथ दिनेछ । बिधिन्न भौतिक तथा बिलाशि बस्तुको प्रयोग मार्फत अरुको मन लोभ्याउँन सकिनेछ । पढाई लेखाईमा मेहनेत गरे भन्दा राम्रो नतिजा हात लाग्ने हुँदा मन प्रशन्न हुनेछ । समयमा काम बन्ने हुनाले अन्य क्षेत्रमा लगानि गर्ने बाताबरण बन्नेछ । दैनिक उपभोग्य बस्तु ,औषधी तथा अनलाईनबाट सप्लाई हुने सामानको व्यापार व्यावसाय फस्टाएर जानेछ ।
कर्कट(ही,हू,हे,हो,डा,डी,डु,डे,डो) गोप्य कुराहरु बाहिर आउन सक्छन् ध्यान दिएर काम गर्नुहोला । ऋण,रोग तथा संकटको सामना गर्नुपर्नेछ भने तपाईको काममा अप्ठ्यारा परिस्थितिहरु सिर्जना हुनेछन् । धन सम्पति तथा अचल सम्पति हराउन तथा लुटिन सक्छ सजक रहनुहोला । नयाँ काम शुरु गर्नु भन्दा गरिरहेको कामलाई निरन्तरता दिन सकिनेछ । आर्थिक अभावले कामहरु समयमा सम्पादन नहुँदा मानशिक तनाब बढ्नेछ ।
सिंह (मा,मी,मू,मे,मो,टा,टी,टू,टे) शेयर बजार तथा सट्टाको व्यावसायबाट भनेजस्तो नाँफा कमाउँन सकिनेछ । अध्ययन अध्यापनमा मन जाने हुँनाले भनेजस्तो नतिजा हात पार्न सकिनेछ । माया प्रेमका कोपिलाहरु पक्रियर जानेछन् भने आत्मिय मित्र तथा आफन्तजनको सहयोगले महत्वपुर्ण कामहरु फत्ते गर्न सकिनेछ । तपाईको बौद्धिकताको उच्च मुल्याङकन हुँने तथा शिक्षा क्षेत्रमा राम्रो प्रगति गरि आम्दानिका स्रोतहरु बढाउँन सकिनेछ ।
कन्या (टो,पा,पी,पू,ष,ण,ठ,पे,पो) ईज्जतिलो काम गर्ने अवसर आएपनि खुट््टा तान्ने तथा फसाउँने मानिसहरु हावि हुनेछन् । राजनिति तथा समाजसेवामा जनताको समर्थन पाउँन कडा मेहनेत गर्नुपर्नेछ । व्यापार व्यावसायमा नाँफा कमाउन निकैनै संघर्ष गर्नुपर्नेछ भने सवारि साधन तथा घर जग्गाको किनबेच बाट केहि मात्रमा लाभ लिन सकिनेछ । पढाई लेखाई अरु दिन भन्दा कमजोर रहने हुँनाले नतिजा अरुकै पक्षमा जानेछ ।
तुला (रा,री,रु,रे,रो,ता,ती,तू,ते) दाजुभाई तथा छिमेकिसँग कुनैपनि कारोबार गर्दा ध्यान दिनुहोला बिवाद बढ्ने योग रहेकोछ । व्यापार व्यावसायमा लगानि गर्नको लागि केहि समय पर्खनुनै उचित हुनेछ । अन्धबिश्वासले मनमा गतिलो डेरा जमाउँने हुँदा मनोबल कमजोर रहनेछ । लेखन तथा साहित्यमा सुरु गरिएका कामहरु थाति रहनेछन् । प्रेममा रमाउँन चाहनेहरुका लागि समय उत्तम नहुन सक्छ । यात्रा हुने भएपनि यात्राका क्रममा दुख हुन सक्छ ध्यान दिनुहोला ।
बृश्चिक(तो,ना,नी,नू,ने,नो,या,यी,यू) समाजमा आफन्त तथा आत्मिय मित्रका साथ सुमधुर सम्बन्ध स्थापना गर्न सकिनेछ । अध्ययनमा प्रशस्त समय दिन सकिने हुँनाले चाहेजस्तो सफलता प्राप्त गर्न सकिनेछ भने बुद्धिमता पुर्वक गरिएको कामहरु सफलता पुर्वक सम्पन्न हुनेछन् । असहज परिस्थितिको सामना गर्नुपरेपनि सार्थक नतिजा निकाल्न सकिने हुँनाले मन प्रशन्न हुनेछ । पारिवारिक माहोलमा जमघट भई नयाँ साथिहरु बनाउँन सकिने तथा स्वादिष्ट भोजन ग्रहण गर्न सकिनेछ ।
धनु (ये,यो,भा,भी,भू,ध,फा,ढा,भे) घर परिवारका ईच्छा आकांक्षा तथा दैनिक उपभोग्य बस्तुहरुको परिपुर्ति गर्न सकिनेछ । मानव निर्मित भौतिक बस्तुहरुको प्रयोग गर्न पाईने हुदा मन प्रसन्न रहनेछ । पारिवारिक माहोलमा सहभागि भई मिष्टान्न भोजन ग्रहण गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ । प्रतिष्पर्धिहरुलाई किनारा लगाउदै अध्ययनमा चाहेजस्तो सफलता हात पार्न सकिनेछ ।
मकर (भो,जा,जी,जू,जे,जो,ख,खी,खू,खे,खो,गा,गी) कामहरु समयमा सम्पन्न नहुने तथा गल्ति गर्नाले दण्ड तथा जरिवाना तिर्नु पर्ने हुन सक्छ ध्यान दिनुहोला । पढाई लेखाईमा समय दिन नसक्दा अरुभन्दा पछि परिनेछ । स्वास्थ्यमा समस्या आउने तथा भौतिक साधन स्रोतको प्रयोग गर्दा ख्याल गर्नुहोला औषधि उपचार खर्च बढेर जानेछ । लामो दुरिको बिदेश यात्राको गतिलो योग रहेकोछ भने बिदेशमा बसेर पेशा व्यावसाय गर्नेहरुका लागि समय उत्तम रहेकोछ ।
कुम्भ (गू,गे,गो,सा,सी,सू,से,सो,दा) पढाई लेखाईमा भनेजस्तो नतिजा हात लाग्नेछ भने नया ज्ञान सिक्ने अवसर प्राप्त हुनेछ । माया प्रेमको डोरो कसिलो भएर जाने तथा दाम्पत्य सुखले मन प्रफुलित हुनेछ । दैनिक उपभोग्य बस्तु ,औषधी तथा अनलाईनबाट सप्लाई हुने सामानको व्यापार व्यावसाय फस्टाएर जानेछ । पुराना कामहरु फत्ते हुने तथा नया काम आउने हुदा दैनिक व्यास्त जस्तै रहनेछ ।
मीन(दी,दू,थ,झ,ञ,दे,दो,चा,ची) निर्णय क्षमतामा बृद्धि भएर जाने तथा कार्यक्षेत्रमा तपाईको निर्णयको उच्च सम्मान गरिनेछ । बिवादित बिषयहरु हल भएर जाने तथा सत्रुहरु आफै किनारा लाग्ने हुँनाले काम गर्न सहज हुनेछ । मान सम्मान तथा ईज्जत प्रतिष्ठामा बृद्धि भएर जानेछ । दैनिक उपभोग्य बस्तु ,औषधी तथा अनलाईनबाट सप्लाई हुने सामानको व्यापार व्यावसाय फस्टाएर जानेछ । पति पत्नि बिचको सम्बन्ध सुदृड हुनुको साथै माया प्रेमको गाठो गसिलो भएर जानेछ । तपार्ईँको दिन शुभ रहोस् ।
यो साताको राशिफल हेर्नुहोस् : जेठ ९ गते आईतबारदेखि १५ गतेसम्मको
वर्षाको चे’तावनी : अबको तीन दिन उच्च सा’वधानी अपनाउन अनुरोध….
आजको राशिफल हेर्नुहोस् : मिति २०७८ साल साउन १९ गते मंगलबार तदनानुसार ईश्वी सन् २०२१ अगष्ट ०३ तारिख
बिष्णु बरालको माइतीले लग्यो सबै दाइजो फिर्ता ! हे’र्नुहोस् (भिडियो सहित)
हामीले बुहारीलाई रंगेहात भेट्दा पनि केहि गर्न सकेनौ, मेरो भाइले सहन नसकेर आ.त्मह.त्या गर्यो भन्दै भक्कानिइन दिदि ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)
आफ्नो पूर्वपतिले अर्को विवाह गर्ने खबर सुनेपछि मिना ढकाल आ’गो, मनोजले से’ क्सको लागि विवाह गर्न लागेको आ’रोप ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित) (3,416)
टिकटकमा भाइरल बनेकी राउटे युवतीलाई हो.टलमा लगेर यौ.न दु.र्व्य.वहार गरेको भिडियो बाहिरीएसंगै संलग्न ३ जना युवक प.क्राउ….. (2,288)
सुनचाँदीको मूल्य फेरी ह्वात्तै घट्यो, यस्तो छ आजको भाउ….. (1,871)
अन्माएर गाडीमा चढीसकेकी बेहुली अंकललाई अंगालो हालेर बेहुलाको घर नजाने भन्दै नछोडेपछी भिडियो भयो भाइरल ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित) (1,813)
आज शुक्रबार सुनचाँदीको मूल्य घट्यो ! हेर्नुहोस् प्रति तोला कति पुग्यो….. (1,657)
आजको राशिफल हेर्नुहोस् : मिति २०७८ साल असोज १२ गते मंगलबार तदनानुसार ईश्वी सन् २०२१ सेप्टेम्बर २८ तारिख
आजको राशिफल हेर्नुहोस् : मिति २०७८ साल असोज ११ गते सोमबार तदनानुसार ईश्वी सन् २०२१ सेप्टेम्बर २७ तारिख
यो हप्ताको राशिफल हेर्नुहोस् : असोज १० गते आईतबारदेखि असोज १६ गते शनिबारसम्मको
बेलायतमा भिसी कुलवीर थापा मगरको सालिक अनावरण
भोलिको राशिफल हेर्नुहोस् : मिति २०७८ साल असोज ११ गते सोमबार तदनानुसार ईश्वी सन् २०२१ सेप्टेम्बर २७ तारिख